हाम्रा नेतालाई ‘कुरी कुरी’ भन्दै पशुपति शर्माको अर्को गीत भाइरल! (भिडियो) — Hamro Sanchar
हाम्रा नेतालाई ‘कुरी कुरी’ भन्दै पशुपति शर्माको अर्को गीत भाइरल! (भिडियो)
हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/११/१९ गते
केही दिन अगाडि देखि ‘लुट्न सके लुट’ गीतले नेपालको बजार नै खाएको थियो । अहिले पशुपती शर्माको फेरि एकपछी अर्को गीत भाइरल हुन थालेको छ।
सामाजिक सन्जाल फेरि उनको अर्को गीतले रङ्गिएको छ। भ्रस्टाचार र अत्याचार बिरुद्द गीत गाउने पशुपति लाई कम्युनिस्ट हरुले भने देखि सहेका छैनन। ‘लुट्न सके लुट , नेपालमै हो छुट’ गीतको अत्याधिक चर्चापछी फेरि उनको अर्को गीतले (पुरानै) चर्चा बटुल्दै छ।
‘ए हैजा, नर्क तिर लैजा’ भनेर उनले नेपाली राजनिती लाई गरेको व्यङ्यले फेरि बजारलाइ तताउन थालेको थियो फेरी अहिले ‘कुरी कुरी, बोलको गितले सामाजिक सन्जाल पुरै रङ्गिएको छ ।
आगामी नयाँ वर्ष २०७६ सालको वार्षिक राशिफल